Kooxda Manchester United oo Zlatan Ibrahimovic dib ugu soo celinaysa Garoonka Old Trafford – Gool FM
Kooxda Manchester United oo Zlatan Ibrahimovic dib ugu soo celinaysa Garoonka Old Trafford
(Manchester) 11 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay xiiseynayso inay garoonka Old Trafford dib ugu soo celiso Zlatan Ibrahimovic, weeraryahanka qibradda leh ayaana isku diyaarinaya inuu ka tago Naadiga Los Angeles Galaxy.
38-sano jirkaan ayaa dhaliyey 29 gool 53 kulan oo uu u ciyaaray kooxda Man United intii u dhaxaysay 2016 illaa 2018 ka hor inta uusan isaga tagin kubadda cagta Yurub si uu xirfaddiisa ciyaareed kaga sii wato horyaalka MLS-ka Mareykanka.
Ibrahimovic ayaa heshiiskiisa kooxda uu haatan ka tirsan yahay ee Galaxy waxa uu ku eg yahay dhammaadka sanadkan, inkastoo tiro ka mid ah Kooxaha waa weyn ee Yurub la la xiriirinayo.
Waxaa la rumeysan yahay inay xiiso badan u hayaan Kooxaha Talyaaniga, iyadoo AC Milan iyo Bologna kaliya ay yihiin labo ka mid ah Kooxaha la sheegay inay ka fiirsanayaan inay u dhaqaaqaan xiddigan reer Sweden.
Sida uu warinayo Warsidaha TuttoMercatoWeb Man United ayaa si weyn u ugaarsanaysa Weeraryahankan kaasoo ay suuro-gal tahay inuu ku imaan karo heshiis illaa dhammaadka kal ciyaareedka 2019-20.
Anthony Martial iyo Marcus Rashford ayaa labaduba ku jiray qaab ciyaareed wanaagsan isbuucyadii dhowaa, laakiin bixitaankii Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez ayay Man United doonaysaa inay hesho Weeraryahan kale oo qibrad leh.
Ibrahimovic ayaa dhaliyey 53 gool 58 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan kooxda uu haatan ka tirsan yahay, halka uu Weeraryahankan ku guuleystay horyallada kala duwan ee Netherlands, Italy, Spain iyo France intii uu ku jiray xirfaddiisa ciyaareed.